तपाईंको मोबाइलसंग जोडिएका केही रोचक तर सत्य रहस्य - रामकुमार परियार
Home / प्रविधि / तपाईंको मोबाइलसंग जोडिएका केही रोचक तर सत्य रहस्य
तपाईंको मोबाइलसंग जोडिएका केही रोचक तर सत्य रहस्य
मोबाइलसंग जोडिएका कयौं यस्ता कुराहरु पनि छन् जसको बारेमा जानेर तपाइँ अचम्मित हुनुहुनेछ । साथै यो कुरा जानेर तपाइँले धेरै फाइदा पनि उठाउन सक्नु हुनेछ ।
इमरजेन्सी नम्बर :
संसारभरि मोबाइलको इमरजेन्सी नम्बर ११२ हो । यदी तपाइँ मोबाइल कभरेज एरियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने ११२ नम्बर द्वारा तपाइँ रहेको स्थानको क्षेत्रको नेटवर्क सर्च गर्नुहोस् । ख़ास कुरा के हो भने यो नम्बर तबसम्म पनि काम गर्छ जब तपाइँको मोबाइलको किप्याड लक् भएको छ ।
इमर्जेन्सी समयमा ब्याट्री सकियो भने के गर्ने ?
मोबाइलमा जब ब्याट्री लो देखाउंछ र उक्त समय तपाइँ जरूरी कल गर्न चाहनु हुन्छ भने तपाइँ *3370# मा डायल गर्नुहोस् ।
मोबाइल चोरी भएको भए के गर्ने ?
मोबाइल फोन चोरी भएको छ भने सबै भन्दा पहिले फोनलाई निष्क्रिय गर्नुहोस् ताकि चोरले तपाइँको मोबाइलको दुरुपयोग गर्न नसकोस । आफ्नो फोनको सीरियल नम्बर चेक गर्न *#06# डाएल गर्नुहोस् । यस पछी तपाइँको स्क्रीनमा १५ डिजिटको कोड नंबर आउँछ । उक्त नम्बरलाई नोट गर्नुहोस्-अनि कुनै सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस । अनि आफ्नो सर्भिस प्रोभाइडरलाई उक्त कोड दिनुहोस् अनि उसले तपाइँको मोबाइल ब्लक गरिदिनेछ ।